Site Engineer Archives - Glory Assumption Space
Site Engineer – Male/Female - (5) Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)
ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ ၁) Site Engineer – Male/Female - (5) Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) / မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်။ • BE/AGTI ( Civil ) ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ • English စာရရမည်။ • Architecture ပိုင်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဖြစ်ရမည်။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၁ ) နှစ်အထက်ရှိသူဦးစားပေးမည်။အတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက် ထားနိုင်သည်။ • Document ပိုင်းကိုတွဲလုပ်ပေးနိုင်ရမည်။ • Project စလျှင် စစ်တွေတွင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ • နေစရာစီစဉ်ပေးသည်။ • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် တွင်ရှိသော Construction Company ကြီးတွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် တွင်ရှိသော Construction Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Site Engineer – Male - (5) Posts /လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ်(အထက်)
၁) Site Engineer – Male - (5) Posts /လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ်(အထက်) /သုဝဏ္ဏမြို့နယ် ။ • BE ( Civil ) ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ • အထပ်မြင့်အတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည်။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ • အင်းစိန်၊မရမ်းကုန်း၊ဗိုလ်တစ်ထောင် ဆိုဒ်များတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ • သုဝဏ္ဏမြို့နယ် (ရုံးချုပ်) တွင်အင်တာဗျူးဝင်ရပါမည်။ • သုဝဏ္ဏမြို့နယ် (ရုံးချုပ်) တွင်ရှိသော Construction Company ကြီးတွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော သုဝဏ္ဏမြို့နယ် (ရုံးချုပ်) တွင်ရှိသော Construction Company ကြီးတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Site Engineer – Male - (5) Posts/လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁) Site Engineer – Male - (5) Posts/လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် (ရုံးချုပ်) ။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၁ ) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ • BE ( Civil ) /AGTI ( Civil ) ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ • စစ်ကိုင်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ • Construction ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ( ရုံးချုပ် ) တွင်ရှိသော Construction Company ကြီးတွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ( ရုံးချုပ် ) တွင်ရှိသော Construction Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Site Engineer – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ပဲခူးတိုင်း ( ပျဉ်ပုံကြီး )
၁) Site Engineer – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ပဲခူးတိုင်း ( ပျဉ်ပုံကြီး ) ။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။ • BE ( Civil ) , AGTI ( Civil ) ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • အသက် ( ၄၀ ) နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည် ။ • ပဲခူးတိုင်း ပျဉ်ပုံကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည် ။ • နေစရာစီစဉ်ပေးသည် ။ • အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၈:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ • တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ပဲခူးတိုင်း ပျဉ်ပုံကြီးတွင်ရှိသော Construction Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Site Engineer – Male - (5) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၁,၂၀၀,၀၀၀/ ရန်ကင်းမြို့နယ်
Salary Rang : 1000000 above
၁) Site Engineer – Male - (5) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၁,၂၀၀,၀၀၀/ ရန်ကင်းမြို့နယ် ။ • RE ( သို့မဟုတ် ) RSE လက်မှတ်ရရှိထားသူဖြစ်ရမည် ။ • BE ( Civil ) ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ • Construction ပိုင်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး ( ၈ ) နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည် ။ • တာဝန်ကျရာ ဆိုဒ်နေရာသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည် ။ • အင်တာဗျူးဝင်ပါက ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိရုံးချုပ်တွင် အင်တာဗျူးဝင်ရမည် ။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ရန်ကင်းမြို့နယ် တွင် ရှိသော Construction Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
၁) Site ( Engineer ) – Male - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ။
၁) Site ( Engineer ) – Male - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ။ • A.G.T.I or B.Tech or B.E ( Electrical Power ) ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည် ။ • HT / LT လိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို စိတ်ဝင်စား၍ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရပါမည် ။ • အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရပါမည် ။ • ဖယ်ရီရှိသည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၈း၃၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ • စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ ပိတ်သည် ။AS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင်ရှိသော Enineering Company ကြီး တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
၁) Site Engineer ( Interior Decoration ) – Male – ( 8 ) Posts - လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) - တောင်ဥက္ကာလာပမြို့နယ် ။
၁) Site Engineer ( Interior Decoration ) – Male – ( 8 ) Posts - လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) - တောင်ဥက္ကာလာပမြို့နယ် ။ • Site Engineer လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၁ ) နှစ်ရှိရမည် ။ • အချောထည် နှင့် Interior Decoration လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဦးစားပေးမည် ။ • အသက် ( ၃၀ ) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည် ။ • BE ( Civil ) ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ( ၉ ) နာရီ မှ ညနေ ( ၆:၀၀ ) နာရီအထိ ။ • ယူနီဖောင်း ၊ ဖယ်ရီ မရှိပါ ။ • တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက် ပိတ်ပါသည် ။ • Interior Decoration & Construction Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ မှတျခကျြ ။ ။ လေြာကျထားလိုသညျ့ရာထူးမြားကို တဈပါတညျးဖျေါပွပေးကွပါရနျ နှငျ့ CV Form မြားတှငျ Passport ဓာတျပုံ တဈပါတညျး ထညျ့သှငျးပေးပါရနျမတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ။ Email ဖွငျ့လညျးကောငျး၊ လူကိုယျတိုငျလညျးကောငျး လာရောကျ လြှောကျထားနိုငျပါသညျ။ Viber ဖွငျ့ CV ပို့မညျဆိုပါက ဓာတျပုံသခြော ကွညျလငျပွတျသား စှာရိုကျ၍ ပေးပို့ပေးပါရနျ မတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခနျးလိပျစာ – ခွံအမှတျ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကေြာငျးလမျး ၊ ၉ မိုငျ ၊မရမျးကုနျးမွို့နယျ ။ ( ပွညျလမျး ၊ ၉ မိုငျ မှတျတိုငျတှငျ ဆငျးရနျ ။ Ocean North Point နှငျ့နီးပါသညျ ။ )
1.Site Engineer – Male (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) /ရန်ကင်းမြို့ နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ Construction Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1.Site Engineer – Male (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) /ရန်ကင်းမြို့ နယ်။ - Bachelor of Engineering(Civil Engineering)ဘွဲ့ ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၃၀) နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ - မြေသားလမ်းခင်းခြင်း တမံမြေကြီးနှင့်ဆည်မြောင်းလုပ်ငန်းစီမံခန့် ခွဲမှုအတွေ့ အကြုံ(၃) နှစ်ရှိရမည်။ - မြေသားပိုင်း Survey ကျွမ်းကျင် , Estimate တွက်ချက်မှုအတွေ့ အကြုံ(၂) နှစ်ရှိရမည်။ - ဌာနဆိုင်ရာများဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ရမည်။ - နယ်တွင် နေစားငြိ်မ်း နေနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09 977397705, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ Construction Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1.Site Engineer – Male (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) /ရန်ကင်းမြို့ နယ်။ - Bachelor of Engineering(Civil Engineering)ဘွဲ့ ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၃၀) နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ - မြေသားလမ်းခင်းခြင်း တမံမြေကြီးနှင့်ဆည်မြောင်းလုပ်ငန်းစီမံခန့် ခွဲမှုအတွေ့ အကြုံ(၃) နှစ်ရှိရမည်။ - မြေသားပိုင်း Survey ကျွမ်းကျင် , Estimate တွက်ချက်မှုအတွေ့ အကြုံ(၃) နှစ်ရှိရမည်။ - ဌာနဆိုင်ရာများဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ရမည်။ - နယ်တွင် နေစားငြိ်မ်း နေနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09 977397705, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Site Engineer - Male - (5) Posts/လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Interior Decoration Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ ၁) Site Engineer - Male - (5) Posts/လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။  B.E Civil နှင့် ကျောင်းပြီးရပါမည်။  Team work ဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။  Interior Decoration လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၂)နှစ် ရှိရပါမည်။  ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။  ဒေသမရွေး တာဝန်ထမ်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09977397705, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )  B.E Civil နှင့် ကျောင်းပြီးရပါမည်။  Team work ဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။  Interior Decoration လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၂)နှစ် ရှိရပါမည်။  ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။  ဒေသမရွေး တာဝန်ထမ်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09977397705, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Senior Site Engineer – Male - (5) Posts / လစာ- ၇၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ ရန်ကုန်/အင်းလေး /မန္တလေး/ပဲခူး တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရမည် - မြောက်ဥက္ကာလပမြို့နယ် ( ရုံးချုပ် ) ။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Construction Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ ၁) Senior Site Engineer – Male - (5) Posts / လစာ- ၇၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ ရန်ကုန်/အင်းလေး /မန္တလေး/ပဲခူး တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရမည် - မြောက်ဥက္ကာလပမြို့နယ် ( ရုံးချုပ် ) ။ - B.E (Civil ) ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁၀)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - QC ပိုင်း Structure Software ပိုင်းနားလည်းသူဖြစ်ရမည်။ - အသက် ၃၈ မှ ၄၅ ကြားဖြစ်ရမည်။ - နေစားငြိမ်းစီစဉ်ပေးသည်။ - ပဲခူးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ - မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင်အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Site Engineer – Male (5)Posts/လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Interior Decoration Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Site Engineer – Male (5)Posts/လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်/မြောက်ဥက္က္ကလာပမြို့နယ်။ - BE/Btech/AGTI (Civil ) ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - Site တစ်ခုလုံးကို Management လုပ်နိုင်ရမည်။ - Drawing ဖတ်နိုင်ရမည်။ - လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရတခါတရံနယ်သွားနိုင်ရမည်။ - Interior Decoration ပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Site Engineer – Male / Female –5Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် / လှိုင်မြို့နယ်
မင်္ဂလာပါရှင်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင် မြို့နယ်တွင်ရှိသော Construction ကုမ္ပဏီကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းအမြန်လိုအပ်နေပါသည်။ 1.	Site Engineer – Male / Female –5Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် / လှိုင်မြို့နယ် •	တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသောသူဖြစ်ရမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၅ နှစ်ရှိရမည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းပေးပါမည်။ •	အသက် ၃၀နှစ်အထက် ဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။  Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။  Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။  E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com ,gasrecruit.hr4@gmail.com  Phone Number - 09- 262223783 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784  Viber Phone Number – 09263121101 ,09262223783, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး ) ။
ှSales Engineer - Male / Female - (5) Posts /Salary -250,000 (Above) Kyat .
****************** Urgent Requirement ****************** မင်္ဂလာပါGASနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောစမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော ကုမ္ပဏီများတွင် အောက်ပါဝန်ထမ်းများလိုအပ်နေပါသည်။ 1. Sales Engineer - Male/Female – (5) Posts /Salary – 250,000 (Above) Kyat /Sanchaung Township . - Generator နှင့်ပက်သကပြီ်းအရောင်းအတွေ့အကြုံ(၂)နှစ်ရှိရမည်။ - အသက် (၄၀) အောက်ရှိသူများဖြစ်ရမည်။ - တက္ကသိုလ်တခုခုမှ ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူများလဲဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Site Engineer - Male (5) Posts
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Urgent Position 1. Site Engineer –Male (5) Posts / Salary 500000 Kyats /Exp ပေါ်မူတည်ပြီးလစာညှိုနှိုင်းနိုင်ပါသည် / Tan Hlyin Township Requirements -Exp3years. -B.E (Civil) -ဖယ်ရီရှိပါသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )